Centerka Hadhaawe Oo Uu Buux Dhaafay Biyo-Xidhenkii Laga sameeyay - Cakaara News
Centerka Hadhaawe Oo Uu Buux Dhaafay Biyo-Xidhenkii Laga sameeyay
Godey( cakaaranews ) Talaado 12ka April 2016, Biyo-xidheen wayn oo laga dhisay centerka Hadhaawe ee Degmada Goday ayaa buux dhaafay islamarkaana ay bilaabeen bulshadii aagaas daganayd inay ka faa'iidaystaan kadib markii ramxadii roobku sifiican uga da’day aagaas.
Hadaba Gudoomiyaha Degmada Godey mudane Xasan Cali Cabdi oo u waramay shabakada wararka ee cakaaaranews ayaa sheegay in meelo kamida degmada ay roobabkii Gugu sifiican uga da’een iyadooy Biyo xidhenka wayn ee degmada Godey ee kuyaala centerka Hadhaawe uu sifiican roobku u buux dhaafiyay taas oo biyuhuna dib u fadhiisteen ilaa 5 km dhul dhan.
Dhinaca kale Gudoomiyaha ayaa sheegay inay bilaabeen abaa-bulkii iyo wacyigalintii dadkii kafaa'iidaysan lahaa. Isagoo xusay in ay arkeen oo ay lakulmeen dad badan oo guda-galay abuurashada beeraha. Gudoomiyaha oo hadalkiisii sii wata ayaa u mahad celiyay allaha raxmaanka ah ee roobka keenay.
Ugudanabyna Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in shacabka kudhaqan degmada Godey ay u riyaaqeen sida loogu gulaystay hadafkii laga lahaa biyo xidheenka. Taas oo ahayd mid kamida wadooyinka loomarayo kamidho dhalinta qorshaha Kobaca iyo Isbadalka Dhaqaalaha wajigiisa 2aad (GTP2) kaasoo ku qotoma ladagaalanka saboolnimada iyo sidii looga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhax-dhaxaadka yahay.